भिडियो Archives » Page 41 of 86 » Etajakhabar
शंकर बिसी र पार्वती राई बेनी बजार घुम्न जाँदा जे भयो (भिडियो)
ताजाखबर। पछिल्लो समय निर्देशक तथा मोडल शंकर बिसी र पार्वती राई पश्चिम नेपालको बेनी बजार घुम्न गएको चर्चा व्यापक छ । उनिहरु घुम्न मात्र गएनन, माया प्रेमको कुरामा पनि अलमल भए । बेनी बजार घुमेर पार्वतीले शंकरलाई चोखो माया लाएको बताएकी छिन् । शंकरले पनि पार्वतिको दिलमा बास बस्ने आश गरेका छन् । यो एक नयाँ नेपाली रोइला गीतको प्रसंग हो, जसमा शंकर बिसी र पार्वती राईको लोभलाग्दो अभिनय छ । लोकप्रिय सर्जक ...
चलचित्र ‘लाल्टिन’ को रिलिज डेट पोस्टपेन्ड, दयाहाङ र प्रियंकाको गज्जबको अभिनय (भिडियो सहित)
माघ २६ गते- चलचित्र लाल्टिनको रिलिज डेट २ महिना पछि धकेलिएको छ । यसअघि चैत्र १८ लाई मिति तय गरिएपनि अब, यो चलचित्र आउँदो बर्षको जेठ २६ गतेबाट मात्रै रिलिज हुने भएको हो । चलचित्रमा दयाहाङ राई , प्रियंका कार्की, केकी अधिकारी लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । देव कुमार श्रेष्ठको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रको नयाँ टिजर समेत सार्वजनिक भएको छ । डेट सर्नुको कारण भने खुलाईएको छैन । चलचित्रमा दयाहा...
यसकारण गायक धिरज राईलाई नेपाली माईकल ज्याक्सन भन्न थालियो (विशेष अन्तर्वार्ता)
ताजाखबर, काठमाडौँ । लुकी लुकी आँखा तिमी नजुदाउ त्यसरी, सेक इट सेक इट, तिमी रुँदा, लगायतका दर्जनौँ चर्चित गीतहरु नेपाली सांगीतिक क्षेत्रलाई दिएर सदावहार चर्चामा रहेका गायक हुन् धिरज राई । उनलाई नेपालमा पप बिधाको खास स्टारका रुपमा आजका दिनमा पनि हेर्ने गरिन्छ । गायक राई नेपालमा पप संगीतलाई स्थापीत गराउने मध्येका एक हुन् । विश्वका करिब तीन दर्जन बढी मुलुक घुमिसकेका गायक राई पछिल्लो समय झन् झन् स्टेज ...
भगवानले दृष्टी दिएनन् तर यस्तो प्रतिभा दिए, हेर्नुहोस् मनै छुने यो भिडियो (भिडियो सहित)
माघ २५ गते- स्याङजाको बाङसिङ घर भएका हुमनाथ पौडेल दृष्टिविहीन हुन् । हाल पोखराको बगरमा बसोबास गर्दै आएका पौडेल गीत संगीत भनेपछि निक्कै हुरुक्क हुन्छन् । दृष्टिविहीन भएपनि बाँसुरी, किवोर्ड लगायतका वाद्यवादनका सामग्रि उनी अन्य सामान्य कलाकारले जस्तै गरी मज्जाले बजाउन सक्छन् । उनको यही प्रतिभालाई कदर गर्दै पोखराको गोंधुली दोहोरी साँझले उनलाई रोजगारको अवसर पनि मिलाईदिएको छ । बाँकी हेर्नुहोस्, द...
मायामा बढी रस हुन्छ, त्यसैले माया शब्दसँग नै बढी खेलीँदो रहेछ :- गीतकार भण्डारी (भिडियो)
ताजाखबर, काठमाडौँ । विदेशमा बसेर पनि गीत संगीतकै क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका गीतकार संगीतकार हुन् उत्तम भण्डारी । ड्युटिमा रहेका समयमा पनि गीत संगीतकै विषयमा घोरीइरहने गीतकार भण्डारी नामका लागी यो क्षेत्रमा लागेको बताउँछन् । किन रुन्छ मन बोलको चर्चित गीत दिएका गीतकार भण्डारीले उक्त गीत ह्वाटसपबाट पठाएको गीत पछि एकाएक हिट हुन पुगेको क्षण उनी कहिल्यै नर्बिसिने बताउँछन् । संगीतकार एवंम गीतकार भण्ड...
ईञ्जीनियरहरुको ‘बदमाश माया’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
माघ २४ गते- ईञ्जीनियर प्रकाश काफ्लेको रचना तथा अर्काे ईञ्जीनियर जयन्ती जोशी र गायक लक्ष्मण चापागाईंको स्वरमा रहेको रोइला गीत ‘बदमाश माया’ युट्युव मार्फत सार्वजनिक भएको छ । जनता डिजिटल प्रा. लि. ले बजारमा ल्याएको यो गीती एलबममा लय लक्ष्मण चापागाईंले नै संयोजन गरेका हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत काफ्लेको यो दोस्रो एल्बम हो । यस अगाडी उनले ‘मेरो अन्तिम धोको’ मार्फत सांगितिक फाँटमा पाइल...
मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य सहयात्राको एउटा गज्जबको उदाहरण (भिडियो सहित)
माघ २३ गते- पोखरामा गत हप्ता आयोजित साहित्य महोत्सवमा हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठसँगको अन्तक्र्रिया निकै चर्चित बन्यो । पत्रकार गुणराज लुईंटेलले मह जोडीका रुपमा परिचित यो जोडीसँग अन्तक्र्रिया गरिरहँदा उपस्थित दर्शकबीच थोरै शान्त र धेरै ताली तथा हाँसोको गुन्जायमान सुनिन्थ्यो । यी दुई कलाकारले आफ्नो साझेदारीको सफलताबारे कार्यक्रममा खुलेरै बोले । हेर्नुहोस्, यो भिडियोः
काठमाण्डौ आएर बोलिन तेरिया मगर, नेपालीको लागि के भनिन् उनले ? (भिडियो)
ताजाखबर। भारतको टेलिभिजन च्यानल कलर्सको चर्चित रियालिटी शो 'झलक दिखलाजा'की विजेता तेरिया मगर शुक्रवार साँझ नेपाल आएकी छिन् । बुटवलकी तेरियाले यसअघि जी टिभिको डान्स इन्डीया डान्स लिटिल मास्टर्स पनि जितेकी थिइन् । झलक दिखलाजा जितेपछि उनि पहिलो पटक नेपाल आएकी हुन् । नेपाल आएपछि उनले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफुलाई जिताउन सहयोग गर्नेलाई धन्यवाद दिएकी छिन् । के भनिन् त तेरियाले ? भि...
गायक प्रमोद खरेलको नयाँ गीत तिमी विना मलार्इ माया गर्ने को छ ? (भिडियो सहित)
माघ २१ गते- गायक प्रमोद खरेलको आवाजमा नयाँ गीत तिमी विना मलाई माया गर्ने को छ सार्वजनिक भएको छ । वसन्त थापाको शब्द तथा संगीत रहेको गीतको म्यूजीक भिडियोमा ओवि रायमाझी र शितल गिरीले अभिनय गरेका छन् । क्रान्ति केसीको निर्देशनमा बनेको म्यूजीक भिडियोलाई अजय रेग्मीले छायांकन गरेका हुन् भने क्रान्ति केसीले सम्पादन गरेका हुन् । हेर्नुहोस्, यो भिडियोः